In ka badan 27 qof oo ku dhimatay dab ka kacay isbitaal ku yaalla Ciraaq | Star FM
Home Caalamka In ka badan 27 qof oo ku dhimatay dab ka kacay isbitaal...
In ka badan 27 qof oo ku dhimatay dab ka kacay isbitaal ku yaalla Ciraaq
Ugu yaraan 27 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dab saameeyay xarun caafimaad oo ku taalla caasimadda wadanka Ciraaq ee Baghdaad.
Waxaa halkaasi lagu daaweynayay dadka uu soo ritay cudurka faafaya ee COVID19.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dabka oo ka billowday qaybta daryeelka degdegga ee loo yaqaano ICU-da ay ku dhaawacmeen 46 qof oo dheeraad ah.
Kadhim Bohanm oo ka mid ah mas’uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in la soo badbaadiyay 90 ka mid ah 120 bukaan oo ku jiray qaybta uu dabku qabsaday.
Previous articleDHAGEYSO:Dowladda Soomaaliya oo guddi u saartay shaqaaqadii ka dhacday garoonka Aadan-Cadde
Next articleWararkii ugu dambeeyay guddoomiye deegaan oo qarax lagu dilay